February 10, 2020 - MM Live News
ကလေးမှေးပွီးသှားတဲ့ မိနျးမက ဘယျလောကျတနျသလဲ ….? ( ဖတျကွညျ့ပါ )
ဇနီးမယားဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာလား.? ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက……ဖတ်​ကြည့်​ပါ ဘယ်လောက်တန်သလဲ ? လောကကြီးမှာ မိန်းမတော်တော်များများက မိမိရင်သွေးလေးတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်စဆောင်ချိန်ကစပြီး လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ရတယ်… သန္ဓေသားအထိအခိုက်မရှိရအောင် (၉)လကျော်မျှ ဂရုတစိုက်စိုက်နဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းနေထိုင်ရတယ်… ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများက အကောင်းမပြောကြဘူး… ခင်ပွန်းသည်တွေအပါအဝင်ပေါ့… “အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲအိမ်မှာကလေးထိန်းရင်း အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတာကို ပင်ပန်းတယ်လား ” တဲ့… အိမ်သူဇနီးမယားတော်တော်များများ ကိုယ့်ယောကျာ်းစီက ဈေးဖိုးမရှိလို့ လက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက် သိမ်ငယ်ရသလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမခံစားတတ်ဘူး… မသိရင်ဘဲ ယောကျာ်းက တစ်အိမ်လုံးအတွက်ရှာကျွေးနေပြီး မိန်းမက ရသမျှပိုက်ဆံ အေးဆေးထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ပုံပဲ… အိမ်အလုပ်လုပ်တာ ဝင်ငွေမရှိဘူးတဲ့လား အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်နဲ့ အလုပ်တန်ကြေးကို တွက်ပြပါရစေ… အမေတစ်ယောက်ဆိုတာဖြစ်လာရင် အောက်ကအလုပ်တွေ စပြီးတာဝန်ယူရပြီ… ၁) အိမ်အကူ >> […]
သင်ျဘောသီး စားခွငျးရဲ့ အံ့ဖှယျ အကြိုးကြေးဇူးမြား
သင်္ဘောသီး စားခြင်းရဲ့ အံ့ဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးများ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် သင်္ဘောသီးဟာ များများ စားသုံးသင့်တဲ့ သစ်သီးထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါများစွာ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီဒင်းတို့နဲ့ အာနိသင်ဖြည့်ထားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ မရှိမဖြစ်အာဟာရတွေ ပေါများစွာပါရှိတယ်။ သင်္ဘောသီးမှာ …. အမျှင်ဓာတ်၊ ကြေးနီ၊ ဖိုးလ်လိပ် (ဗီတာမင်-ဘီ)၊ ပင်နီသိုးနစ်(ခ်)အက်ဆစ်(ဗီတာမင်-B5) တစ်နည်းအားဖြင့် ရေပျော်ဝင်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်၊ မက်ဂနီဆီယမ်၊ ဗီတာမင်-အေ၊ စီ၊ ရီဘိုဖလားဗင်း နဲ့ သားမင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သင်္ဘောသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့…. ၁။ ကိုယ်တွင်းခုခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေခြင်း ၂။ မျက်စိကျန်းမားစေခြင်း ၃။ ကင်ဆာရောဂါကင်းဝေးစေခြင်း ၄။ အသားရေကျန်းမာနုပျိုစေခြင်း ၅။ အစာခြေမှုစနစ်ကောင်းမွန်စေခြင်း ၆။ ဆံပင်ကြီးထွားမှု လျင်မြန်စေခြင်း ၇။ ရာသီမီးယပ်ဝေဒနာကိုက်ခဲမှု သက်သာစေခြင်း […]
ဥရောပဒသေတှငျ အငျအားပွငျး Ciara မုနျတိုငျး ဝငျရောကျလို့ ရာနဲ့ခြီတဲ့ လယောဉျ ခရီးစဉျတှနေဲ့ မီးရထား ခရီးစဉျတှကေို ဖကျြသိမျးခဲ့ရပါတယျ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ။ ။ ဥရောပဒေသ အနောက်မြောက်ပိုင်းကို အင်အားပြင်း Ciara မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်လို့ အားပြင်းတဲ့ လေပြင်းတွေ ကျရောက်ခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်မှာတော့ ရာနဲ့ချီတဲ့ လေယာဉ် ခရီးစဉ်တွေနဲ့ မီးရထား ခရီးစဉ်တွေကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ Ciara မုန်တိုင်းဟာ ဗြိတိန်နဲ့ အိုင်ယာလန်ကိုလည်း ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ယင်းနိုင်ငံတွေမှာ လူနေအိမ် သောင်းချီ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ပြင်သစ် မြောက်ပိုင်း ဒေသ အတော်များများမှာလည်း လိမ္မော်ရောင်အဆင့် သတိပေးချက် ထုတ်ထားရပြီး လူနေအိမ်ပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ လောက် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာ မုန်တိုင်းကြောင့် လှိုင်းကြီးလာမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေရပါတယ်။Ciara မုန်တိုင်းကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်မှာ ပြင်သစ်ကို ဖြတ်ပြီး […]
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေထဲမှာ ဇာတ်ပိုကဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး လမင်းကဗျာကတော့ ဒီနေ့မှာ ညီမလေးမို့မို့မြင့်အောင်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးကို လှူဒါန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လမင်းကဗျာဟာ အလှူအတန်းတွေကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာနဲ့ ဖြူစင်မွန်မြတ်စွာအမြဲလိုလို လှူဒါန်းပေးလေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း နတ်မောက်မြို့ ထန်းပင်မျောင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ညီမငယ်လေးမို့မို့မြင့်အောင်တစ်ယောက် လိုအပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတုတစ်လုံးကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပါ။ အခုလို လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့တာကို “ဒီညီမလေးနာမည်က မို့မို့မြင့်အောင်တဲ့။ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နဲ့ အဝေးသင်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးပါ။ ဇာတိက နတ်မောက်မြို့နယ် ထန်းပင်မျောင်ကျေးရွာ သူနာပြုသင်တန်းတက်နေတာပါ။ သူ့ရဲ့ကွက်လပ်လေးဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ ဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းသာနေလည်းဆိုတာ သူ့မျက်နှာအပြုံးကသက်သေပေါ့။ သူ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ငွေ ၃သိန်းကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နာကနေ ဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းကဗျာက လှူဒါန်းခွင့်ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ အစ်ကိုကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြေင်းပြောထားတဲ့ အပြင် ဒီအလှူပိုစ့်လေးကို မြင်တဲ့(၇)ရက်သားသမီးအပေါင်းလည်း ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အလှူကုသိုလ်လေးကို ထပ်တူထပ်မျှရကြပါစေလို့လည်း […]
တဈခါမှ မိတျကပျမလိမျးဖူးတဲ့ကလေးက မိတျကပျတှယေူလိမျးနတောကို မသင်ျကာလို့ မေးလိုကျသောအခါ
အ ထက (၁) အင်းစိန်ရဲ့ Grate 6(F) အတန်းမှူးမှ ကျွန်မသား လင်းရောင်ရှိန်ကို ပါးရိုက်ခြင်း 7.2.2020 (သောကြာနေ့) ညနေ ၅ နာရီ ကျောင်း ဆင်းပြီး အိမ်သို့ ရောက်ရောက်ချင်း ကလေးက အိမ်က သိမှာစိုးလို့ တခါမှ မလိမ်းဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ကပ်တွေယူလိမ်းလို့ ကျွန်မက မသင်္ကာလို့ မေးလိုက်မှ ကလေးက အကုန်ပြောပြတယ်… ဒီနေ့ကျောင်းမှာ မုန့်စားကျောင်းဆင်းချိန် သူငယ်ချင်းနဲ့ စနှောက်ရင်း တွန်းလိုက်တာ သူ့သူငယ်ချင်းက ဆရာမကို သွားတိုင်တော့ ဆရာမက ကျောကုန်းကိုရိုက်လိုက်တယ်… အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်ကသားက သူ့သူငယ်ချင်းကို မင်းကြောင့်ငါအရိုက်ခံရတာဆိုပြီး ဆဲလိုက်တယ် ဘေးကတစ်ယောက်ကကြားပြီး ဆရာမကို သွားတိုင်တာ ဆရာမက ကျွန်မသားရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဆယ်ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တယ်ပြောပါတယ်… မြင်တဲ့ […]
အမတေို့က သမီးကို မြှျောနပေါတယျ.. ငါ့သမီးပွနျလာရငျ စီးပွီးကွိုပါ့မယျ ငါ့သမီးရယျ
February 10, 2020 February 10, 2020 MM Live News
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သမီးလေးအတွက် မိခင်ဖြစ်သူမှ ပြန်တွေ့ရန်မျှော်လင့်နေ “ငါ့သမီးလေး အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါ.. အမေတို့က သမီးကို မျှော်နေပါတယ်.. ငါ့သမီးပြန်လာရင် စီးပြီးကြိုပါ့မယ် ငါ့သမီးရယ်…” ဟု မိခင်ဖြစ်သူပြောကြား ဖေဖော်ဝါရီ(၉) AlinnMyay(အလင်းမြေ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကွန်းတိုက်နယ်၊ မင်းကွန်းမြောက်ရွာ၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ (ဦးမြင့်ဇော်) မရှိတော့ပါ၊ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကေသီဦး (ခေါ်) ဒေါ်ကေသီ မှ မုဆိုးမဘဝဖြင့် ရုန်းကန်ပြီး သားသမီးတွေကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလို သားသမီးတွေအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို မကြည့်ရက်လို့ အသက် (၁၄) နှစ် အရွယ် သမီးဖြစ်သူ မဖြိုးနန္ဒာ ဟာ သူ တတ်နိုင်သလောက် ခွန်အားနဲ့ ဝင်ငွေရဖို့ ပန်းရံလုပ်ငန်းကို လိုက်လုပ်ရာမှတဆင့် မန္တလေးမြို့ စန္ဒာမေတိုက်ခန်းနေတယ်လို့ […]
မနကျ ၄း၃၅ အဝေးပွေးလမျးမတှငျ ဟိုငျးလပျနှငျ့ သဈတငျကား ယာဉျတိုကျမှု ခရီးသညျ ၂ ဦးစိုးရိမျရ
9-2-2020ရက်နေ့ မနက် ၄း၃၅ အချိန် ရန်ကုန် -မော်လမြိုင် အဝေးပြေးလမ်းမ ကျိုက်ထိုမြို့ ဒေါင်းတောင်ကုန်းဆင်းတွင် ဟိုင်းလပ်မော်တော်ယာဉ်နှင့် သစ်တင်မော်တော်ယာဉ် …. ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ဖုန်းသတင်းရရှိသဖြင့် လူမှုကူညီရေးအသင်း ကျိုက်ထိုမှ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် (၂)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၁)စီး၊ ဖက္ကလိပ် လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် (၁ )စီးတို့ဖြင့် …. ချက်ချင်းထွက်ခွာ၍ ဟိုင်းလပ်ယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း (ကျား ၁)ဦး(အနီရောင်အဆင့်) ခရီးသည်(မ ၁) ဦး(အနီရောင်အဆင့်) ၊ (ကျား ၁ဦး) အဝါရောင်အဆင့်၊ ( မ ၁ဦး) အဝါရောင်အဆင့် တို့အား ကျိုက်ထိုပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သစ်တင်မော်တော်ယာဉ်မှ ယာဉ်မောင်း (ကျား ၁ ဦး) မှာ ခေါင်းခန်းအတွင်း ညှပ်နေသဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးမှ […]
မနညေ့က ရှမေနျးသူ Express ယာဉျပျေါမှ ကိုယျဝနျ(၇)လနှငျ့ အရေးပျေါဗိုကျနာလာသဖွငျ့ အမွနျလမျးတပျဖှဲ့မြားနှငျ့အတူ ကလေးမှေးဖှားပေးခဲ့ရ
တောင်ငူသို့သွားနေသည့်ကားပေါ်တွင် ကလေးမွေးဖွား ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၉) ရက်နေ့၊ ည (၀၈:၄၅) နာရီအချိန် မိုင်တိုင် (၅/၀) အနီးတွင် တောင်ငူ-ရန်ကုန်ပြေးဆွဲသည့်၊ ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်အမှတ် 2D/—ခုံနံပါတ်(၁၁)တွင် လိုက်ပါလာသည့် …. မနွေးနွေးဇင်၊၂၃နှစ်၊ မြို့ဦးရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နေသူသည် (၇)လအရွယ်ကိုယ်ဝန် မွေးဖွားရန် ဗိုက်နာလာသဖြင့် ကူညီပေးရန် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အမှတ်(၃) စခန်း တပ်ဖွဲ့ ဝင်များသို့ ဆက်သွယ်ကူညီ တောင်းခံလာသဖြင့် …. တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ယာဉ်ပေါ်ပါခရီးသည်ဆရာဝန်၏ အကူအညီရယူရ်ျ အခြေအနေ အရ ယာဉ်ပေါ်တွင် သမီး မိန်းခလေး ကို မီးဖွားပေးခဲ့ပြီး လူနာအား လိုအပ်သော ဆေးကုသခံယူရန်အတွက် လှည်ကူးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကူညီ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ (ယာဉ်ပေါ်တွင် မွေးဖွားနိုင်ရေး အမြန်လမ်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ကူညီပေးပါသော […]